sys – GlobalNet
GlobalNet ၏ Dedicated Internet Access Plan ကို သုံးစွဲနေသော Customersများအနေဖြင့် အင်တာနက်မြန်နှုန်းကို ကိုယ်တိုင်စမ်းသပ်စစ်ဆေးနိုင်သော နည်းလမ်းများ
GlobalNet ၏ Dedicated Internet Access Plan ကို သုံးစွဲနေသော Customersများအနေဖြင့် အင်တာနက်မြန်နှုန်းကို ကိုယ်တိုင်စမ်းသပ်စစ်ဆေးနိုင်သော နည်းလမ်းများ ပထမဦးစွာအနေဖြင့် GlobalNet Media Converter Modem ပေါ်မှာရှိသည့် အောက်ပါပုံတွင် ဝိုင်းပြထားသည့် Patch Cord Cable ကြိုးအဝါ‌ရောင်နှင့် computer သို့ချိတ်ဆက်ရန်လိုအပ်ပါသည်။ လုပ်ဆောင်ရန်နည်းလမ်းများအဆင့်ဆင့် အဆင့်၁။ ကွန်ပြူတာပေါ်ရှိ Window Key+R Key ကိုနှိပ်ပါ။ ထို့နောက် အောက်ဖော်ပြပါ Run Box ကိုတွေ့ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ အဆင့်၂။ “ncpa.cpl” command ကို Run Box တွင် ရိုက်ထည့်ပြီး OK ဟု နှိပ်ပါ။ အဆင့်၃။
GlobalNet ၏ Dedicated Internet Access Internet Plan ကို သုံးစွဲနေသော Customers များအနေဖြင့် အခက်အခဲ တစုံတရာရှိပါက ကိုယ်တိုင်ကြည့်ရှုစစ်ဆေးရရှိနိုင်မည့် အချက်များ 1. ပထမဦးဆုံးအနေဖြင့် GlobalNet Media Converter Modem ပေါ်မှာရှိတဲ့ OLOS LED မီး သို့မဟုတ် FX LED မီးလုံးအခြေအနေများကို စစ်ဆေးပေးရမှာ ဖြစ်ပါသည်။ OLOS LED မီးဆိုသည်မှာ Optical Loss Of Signal ဖြစ်ပြီး Media Converter Modem စက်တွင်ရှိသော အချက်ပြ Signal မီးလုံးဖြစ်ပါသည်။ 2. GlobalNet Media Converter